ZTE Blade Star 2, smartphone misy fifehezana ny feo | Androidsis
ZTE Blade Star 2, finday avo lenta mifehy ny feony
Alfonso ny voankazo | | MWC, About us, ZTE
Ny isan-karazany amin'ireo fitaovana nentin'ny mpanamboatra aziatika tamin'ity fanontana ny MWC mavesatra fotsiny izany. Efa nasehonay anao ny tsiambaratelo rehetra an'ny ZTE Blade S6, an'ny ZTE Blade S6 Plus y ZTE Spro 2.
Ankehitriny dia hasehoko anao ny tsiambaratelo rehetra an'ny ZTE Blade Star 2, fitaovana iray fehezin'ny feo ary izany, na dia Sinoa sy Anglisy ihany aza no fantany ankehitriny, dia tsy ho ela dia hanohana ny Espaniôla izy.
3 ZTE Blade Star 2 miaraka amin'ny rafitra fitarihana feo
ZTE dia manohy miloka amin'ny polycarbonate ho toy ny fitaovana fananganana ho an'ny ankamaroan'ny fitaovana sy ny ZTE Blade Star 2 dia tsy ho diso anjara amin'izany. Na eo aza ny plastika, mahafinaritra ny mikasika azy ny terminal ary mora ny mitantana azy.
Con X X 140.3 69.2 6.9 MG Mazava fa ny ZTE Blade Star 2 dia tsy terminal lehibe be loatra ary ny hateviny dia mahatonga azy ho mahazo aina. Araka ny hitanao amin'ny sary, ity maodely ity dia manaraka ny làlan'ny famolavolana ny laharan'ny Blade.
Ny efijeryo TFT 5 santimetatra manolotra vahaolana amin'ny 1920 x 1080 teboka. Ekena fa tena tsara izy io ary tsikaritra ny lokony 16 tapitrisa. Manana zoro fijerena tsara izy, mihoatra ny fanatanterahana ny iraka ampanaovina azy.
Ny processeur an'ny ZTE Blade Star 2 dia misy SoC Qualcomm Snapdragon 801 quad-core 2.3 GHz herinaratra izay, miaraka amin'ny fahatsiarovany RAM 2 GB, dia hahafahanao mankafy lalao tsy misy olana.
Android 4.4 KitKat no miandraikitra ny famindrana ity fitaovana ity, na dia eo ambanin'ny sosona mahazatra an'ny ZTE Ui Mifavor 3.0. Ny 16 GB fitehirizana anatiny azo velarana amin'ny karatra micro SD dia toa tsy ampy ho an'ny terminal misy ireo toetra ireo.
Fa kosa ny Bateria 2.300 mAh Toa somary tsy fahita firy isika raha jerena ny lanjan'ireo fitaovana entina manohana azy. Tsy maintsy miandry fitsapana fampisehoana mahareraka kokoa isika hahitantsika ny fomba ahafahany miatrika ny jogging isan'andro.
Ny fakantsary lehibe an'ny ZTE Blade Star 2 dia misy a Lensa 13 megapixel miaraka amina flash LED roa. Ireo fisamborana nataonay dia namela tsiro tsara teo am-bavantsika. Amin'ity lafiny ity dia tsy misy zavatra manohitra.
Mikasika ny fakan-tsary eo aloha, ZTE dia nampiditra sensor 5 megapixel izay ahafahanao manao selfie miaraka amina kalitao mihoatra ny ampy na manao antso an-tsary miaraka amina kalitao ekena kokoa.
ZTE Blade Star 2 miaraka amin'ny rafitra fitarihana feo
Ny fiasa miavaka indrindra amin'ity fitaovana ity dia miaraka aminy rafitry ny fanekena feo. Ity mpanampy ity, izay mavitrika hatrany, dia manome ny fahafaha-mifehy ny ZTE Blade Star 2 amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo.
Podemos mitahiry andiana fifandraisanas ka rehefa miteny ny anaranao ianao ary manery ny bokotra Home, dia miantso ho azy ilay fitaovana. Azonay atao ihany koa ny manafatra izany, ohatra, manomboka milalao mozika ianao na maka sary.
Ny fitsapana nataonay dia nahatonga anay afa-po kokoa. Ny rafitra dia nanaiky hatrany ny baikonay ary, rehefa jerena fa ny ZTE dia iray amin'ireo mafy indrindra, tsy maintsy ekentsika ny asa tsara ataon'ny mpanamboatra.
Indrisy Sinoa sy Anglisy ihany no manohana ny ZTE Blade Star 2Na dia nampanantena anay aza ireo tovolahy ao amin'ny ZTE fa afaka fotoana fohy dia havaozina ilay fitaovana hahafahana manome baiko amin'ny Espaniôla.
Terminal iray tena mahaliana. Tena tiako ny rafitra fanaraha-maso ny feo, na dia mbola tsy tena nohavaozina tamin'ny Android 5.0 L. Na izany aza, raha mitady terminal ahafahanao mitady mifehy fa tsy manainga rantsantanana, ny ZTE Blade Star 2 mandondona eo am-baravaranao.
Eny, rehefa mahatratra ny tsena eoropeanina. Ary, na dia nampanantena anay aza i ZTE fa hipetraka amin'ny kontinanta taloha ity fitaovana ity, tsy fantatray ny daty na ny vidiny marina. Na dia mihevitra ny mampiavaka azy ara-teknika azaEny, azontsika atao ny mieritreritra fa eo amin'ny 400 - 500 euro izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » ZTE » ZTE Blade Star 2, finday avo lenta mifehy ny feony
Lenovo Tab2 A7 / 30 a Lenovo Phablet aseho ao amin'ny MWC15 amin'ny vidiny 79 Euros fotsiny
Alcatel One Touch Watch, Alcatel's Wareable tsy misy Android Wear amin'ny vidiny 129 euro